Google yakazivisa kugadzirisa kune yayo yekuchengetera mutemo | Linux Vakapindwa muropa
Google yakazivisa kugadzirisa kune yayo yekuchengetera mutemo
Musi waJune 1, 2021, Google ichashandura mitemo yayo yekuchengetedza maakaundi mahara uye kwete kuvandudza izvo zvauinazvo, nekuti zvakanyanya, kana iwe uine mahara account uye uri semi-wenguva dzose mushandisi weGoogle chengetedzo, iwe unofanirwa kuve wakagadzirira kubhadhara kubva rinouya gore.
Kubva maemail ese matsva, zvinyorwa, mifananidzo uye mavhidhiyo, kubva musi uyu, ichaverengerwa mu15 GB yekuchengetedza kwemahara. Aya anowanzo kuve madiki mafaera, asi zvinonyanya kukosha, angangoita ako ese ekuodha pasi zvino achaverengerwa.
Uye ndeyekuti angangoita makore gumi apfuura kubva Google payakaunza yakabatana chengetedzo sisitimu yeGmail, Google Mifananidzo uye Google Drive. Vazhinji vedu tinovimba neGoogle kuchengetedza data redu, angave maemail, mapikicha, zvinyorwa kana mavhidhiyo.
"Kutanga musi wa1 Chikumi, 2021, mifananidzo mese mitsva nemavhidhiyo aunoteedzera zvinoenderana ne15GB yemahara yekuchengetera inouya neakaundi yese yeGoogle, kana imwezve yekuchengetedza yaunotenga senhengo yeGoogle One. Kuchengeta account kwako Google yakagovaniswa pakati peDrive, Gmail uye Mifananidzo. Shanduko iyi inotibvumidzawo kusangana nekukura kuri kudiwa kwekuchengetedza.
"Uye, senguva dzose, tinokudza kuzvipira kwedu kuti tisashandise ruzivo ruri muGoogle Photos pakushambadzira. Isu tinoziva kuti urwu shanduko yakakosha inogona kuuya sechishamiso, saka taida kukupa ziviso yakawanda uye kukupa iwe mukana wekuti uzviite, ”akanyora Google Workspace Mutevedzeri weMutungamiri José Pastor mune blog blog.
Shanduko zvakare inokanganisa Google Workspace uye vanyoreri veG Suite yedzidzo uye G Suite yevasina-purofiti vatengi.
Iye zvino, yega yega yemahara Google account inouya ne15GB yekuchengetedza online kune zvako zvese zvekuchengetedza zvaunoda.
Nekudaro, pane nhau dzakanaka mukuzivisa kweGoogle. Kuita kuti shanduko ive nyore nyore, akaisa mafoto uye mavhidhiyo mune zvemhando yepamusoro pamberi paJune 1, 2021 haizoverengera kune iyo 15 GB chengetedzo yemahara. Google inofungidzira kuti makumi masere muzana evashandisi vayo vanenge vaine makore matatu kuti vasvike iwo ma80 GB.
Dzimwe nhau dzakanaka: lPixel mafoni haasunungurwe kubva pamitemo mitsva iyi, sezvo ivo vacharamba vachipa risingaperi "yemhando yepamusoro" backups. Aya ma backups anodzvinyirira makuru mafoto kune gumi nematanhatu megapikiseli, nepo mavhidhiyo ari pamusoro pe16p achadzoserwa mune iyi fomati.
NezveGoogle Drive, zvinotaurwa kuti:
"Chero magwaro matsva, maspredishiti, masiraidhi, madhirowa, mafomu kana mafaera eJamboard anoverengera ku15 GB yekuchengetera iwe yawakapihwa kana chero imwe yekuchengetedza yakapihwa neGoogle One."
Shanduko idzi dzinounza dambudziko hombe, nekuti nhasi Google Mifananidzo inokutendera kuti uchengetedze isina muganho mifananidzo (uye mavhidhiyo, kana ari muHD) yemahara chero bedzi vaine resolution yakaderera pane 16MP kana kusarudza iyo Google kudzikisira mhando.
Kutanga munaJune 2021, chero matsva emhando yepamusoro mafoto kana mavhidhiyo izvo izvo zvisiri kutariswa pachikamu chako zvichaverengera kune yemahara 15GB. Uye sezvo vanhu vachitora mamwe mafoto gore rega rega, ichi chemahara mugove haugare kwenguva refu.
Izvo zvinofanirwawo kucherechedzwa kuti aripo Magwaro, Spreadsheets, Mharidzo, Dhirowa, Mafomu kana mafaera eJardard haaverengerwi pane imwechete mamiriro: kuti iwe unongovabvunza usina kuvashandura kubva munaJune 1, zvikasadaro vanozoverengerwa.
Pamwe pamwe neidzo zvidzoreso kuchengetedza, pane zvimwe zvishoma shanduko dzakakodzera kuziva nezvazvo. Kana iyo account isingashande muGmail, Dhiraivha, kana Mapikicha kweanopfuura makore maviri, Google "inogona" kubvisa zvirimo kubva muchigadzirwa icho.
Google inopokana chii chaunoda ita shanduko idzi kuti 'uenderere mberi nekupa chiitiko chakakura chekuchengetedza kune wese munhu uye enderera pamwe nekuwedzera kudiwa.
Zviri pachena kuti hazvina kudhura, asi Google iri zvakare mukutonga kwese kwenyaya yacho uye yaifanirwa kunge iine fungidziro yemukati yekuti mamiriro acho achaita sei paakatanga kuseta marongero aya.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Google yakazivisa kugadzirisa kune yayo yekuchengetera mutemo
Hapana chinhu, Google Takeout, mifananidzo pazasi. Amazon Mifananidzo, mifananidzo pamusoro. Iri ibasa rakakura, asi kuve Prime kwakakodzera.
Amazon chii? Ehe, neGoogle hanzvadzi yerudo, hazvikunetsi.
GitHub Yakafukunurwa Zvitsva Zvitsva, Enterprise Sponsors, uye Zvimwe
Huawei akaedza software yekuchenjera yekuziva boka reMuslim